The4Houses of DISC - Mandale, Myanmar
The4Houses of DISC
Events - Myanmar, Mandale
"ဦးဆောင်သူများအတွက် အလွန်အရေးပါသော Tool တစ်ခုဖြစ်သည့် DISC ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် လေ့လာနိုင်ပါပြီ"
ဦးဆောင်သူတစ်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ သူ့အနေနဲ့ လူတွေအပေါ် ဘယ်လောက်သြဇာညောင်းသလဲ၊ တခြားလူတွေနဲ့ ဘယ်လိုအဆင်ပြေအောင် ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ တော်တော်များများ မူတည်တယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် လူတွေအပေါ် သြဇာညောင်းကာ သူတို့ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွလာအောင် ထိထိရောက်ရောက် ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းဟာ ခေါင်းဆောင်တယောက်အတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းတခုပါပဲ။
အဲဒါဆိုရင် လူတွေနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ဖို့အတွက် ဘာတွေက အရေးကြီးမယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
သင် သတိထားမိကောင်း ထားမိနိုင်တာ တခုရှိပါတယ်။
အဲဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ တချို့လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတာ ကျွန်တော်တို့အတွက် စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းပြီး အရမ်းကို သက်သောင့်သက်သာ ရှိသလို သူတို့နဲ့ စကားပြောဆိုရတာ အပေါက်အလမ်းလည်း တည့်လှပါတယ်။
အဲဒီခံစားမှုဟာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အပြန်အလှန် နားလည်မှုရှိတယ်ဆိုတာထက် ပိုပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အဲဒီလိုခံစားမိတဲ့ မကြာသေးခင်က အဖြစ်အပျက်တခုခုကို ပြန်ခံစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း လူအများစုနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် သက်သောင့်သက်သာ မဖြစ်လှဘဲ အားထုတ်ရတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။
ကိုယ်နဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့သူဟာ ဘယ်ကလာတယ်၊ သူ အမှန်တကယ်လိုချင်တာ ဘာတွေဆိုတာနဲ့ သူရဲ့ ကြံရွယ်ချက်တွေကို အမှန်တကယ်နားလည်နိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်လှပါဘူး။ သူလည်း ကိုယ့်လို ခံစားနေရလိမ့်မယ်လို့ ခံစားမိတဲ့အခါ ထပ်ပြီးတော့ စိတ်မသက်မသာ ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီလိုအခါမျိုးမှာ သူနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံရာက ရလာတဲ့ရလဒ်ဟာ သင်လိုချင်တဲ့ရလဒ်မျိုး ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအတွက် သင် စိတ်ပျက်ကောင်း စိတ်ပျက်ရလိမ့်မယ်၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရမယ်၊ နောက်ပြီး စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာအထိ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မြေပုံမပါဘဲ လမ်းပျောက်နေသလိုမျိုးပေါ့။
လူတွေနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် ဆက်ဆံပြောဆိုနိုင်ဖို့ဆိုရင် အချို့အချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
၁. မိမိရဲ့အပြုအမူဆိုင်ရာ စတိုင်လ်ကို သိရပါမယ်။
၂. မိမိရဲ့အားသာချက်ကို သိရပါမယ်။
၃. အခြားသူရဲ့ အပြုအမူဆိုင်ရာ စတိုင်လ်ကို သိရပါမယ်။
၄. အခြားသူရဲ့ အားသာချက်ကို သိရပါမယ်။
အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေကြတဲ့ DISC အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
DISC ကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့်...
၁. လူတွေရဲ့ အဓိက အပြုအမူဆိုင်ရာစတိုင်လ် (၄) မျိုးကို လေ့လာသိရှိနိုင်ပါမယ်။
၂. မိမိဟာ ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်၊ အခြားသူတွေက သင့်ကို ဘယ်လိုမြင်တယ်ဆိုတာ သိလာရမယ်။
၃. အခြားသူတွေကို ဘယ်လိုလေ့လာအကဲခတ်ရမယ်ဆိုတာ သိရှိလာတဲ့အတွက် သူတို့ကို ပိုမိုနားလည်လာနိုင်မယ်။
၄. သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေ အောင်မြင်ဖို့အတွက် သင်ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်တဲ့ သင့်ရဲ့စတိုင်လ်ကို ဘယ်လိုချိန်ညှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာ သိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Extended DISC Model ၏ နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း
Extended DISC System ဆိုသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၉၀ ကျော် အသုံးပြုခဲ့သည့် အပြုအမူဆိုင်ရာသီအိုရီ (Behavioral Theory) များ အပေါ်တွင် အခြေခံထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Model ၏ အားသာချက်မှာ လေ့လာသင်ယူရလွယ်သည့်အပြင် နားလည်လွယ်ကာ အသုံးပြုရလည်း လွယ်ကူခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Behavioral Style (၄) မျိုးသာ ရှိတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
လူတွေကို အမျိုးအစားခွဲခြားပါက အဓိကစတိုင်လ် (၄) မျိုး ရှိပါတယ်။
၁. အလုပ်ကို ဦးစားပေးသူ
၂. လူကို ဦးစားပေးသူ
၃. အချက်အလက်ကို ဦးစားပေးသူ
၄. အာရုံသိကို ဦးစားပေးသူ
ယင်းကို အခြေခံပြီး လူတွေရဲ့ အပြုအမူဆိုင်ရာစတိုင်လ် (၄) မျိုး ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။
၁. Dominance (ကြီးစိုးတတ်ခြင်း)
၂. Influence (သြဇာညောင်းခြင်း)
၃. Steadiness (တည်ငြိမ်ခြင်း)
၄. Compliance (စနစ်ကို လေးစားလိုက်နာခြင်း)
အဆိုပါစတိုင်လ် (၄) မျိုးမှာ မှတ်သားစရာအချက်တွေ ရှိပါသေးတယ်။
- စတိုင်လ်တခုခုက အခြားတခုထက် ပိုကောင်းသည် ပိုညံ့သည် ဆိုပြီး မရှိပါ။ တခုနှင့် တခု မတူကွဲပြားနေတာပဲ ရှိပါတယ်။
- စတိုင်လ်တခုချင်းစီတွင် အားသာချက်ကိုယ်စီရှိသလို တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတဲ့ နယ်ပယ်တွေလည်း ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။
- သင့်ရဲ့စတိုင်လ်က သင့်အနေနဲ့ ဘယ်အရာတွေကို စွမ်းဆောင်နိုင်ပြီး ဘယ်အရာတွေကိုတော့ဖြင့် မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးလို့ မကန့်သတ်သလို သင် ဘယ်လောက်အောင်မြင်နိုင်သလဲ ဆိုတာကိုလည်း မကန့်သတ်ပါ။
- သင့်စတိုင်လ်က သင်ဟာ ဘယ်လိုပြုမူတတ်တယ်ဆိုတာကိုသာ သတိပြုမိလာအောင် ခန့်မှန်းပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
- သင့်မှာ မည်သည့်စတိုင်လ် ရှိနေသည်ဖြစ်စေ သင်ဟာ အောင်မြင်နိုင်တယ်။
ထက်မြက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာ ကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ် ကောင်းကောင်းသိသလို ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်တွေကိုလည်း သိကြတယ်။
နောက်ပြီး လူအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်း အခြေအနေ အချိန်အခါကိုလိုက်ပြီး ဘယ်လိုပြောဆိုရမယ်ဆိုတာကိုလည်း ကောင်းစွာ သဘောပေါက်ကြတဲ့သူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အရမ်းကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်တခု ရှိပါတယ်။
4 Houses of DISC ဆိုတဲ့ သင်တန်းပါ။ (၂) ရက်ကြာ သင်ကြားမယ့် အဲဒီသင်တန်းမှာ စာတွေ့တင်မကဘဲ Activity တွေ လက်တွေ့လုပ်ရင်းနဲ့ လေ့လာနိုင်မယ့် ထူးခြားတဲ့ Experiential Learning Program ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
4 Houses of DISC သင်တန်းကို Breakthrough Coaching, Training & Consulting ၏ Strategic Partner ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ အခြေစိုက်သည့် အရှေ့တောင်အာရှ၏ ထိပ်တန်း Executive, Leadership and Innovation Capability Development Center တခုဖြစ်သော South East Asia Center (SEAC) ကုမ္ပဏီ၏ သင်ရိုးအတိုင်း ပို့ချပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းတစ်ခုကို လေ့လာခွင့်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
DICS ဆိုတာ ဘာလဲ
စိတ်ပညာရှင်ကြီး Marston ၏ အယူအဆအရ လူတို့တွင် အခြေခံအားဖြင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး (၄) မျိုး ရှိပါတယ်… အဆိုပါ (၄) မျိုးမှာ အတိုကောက်အားဖြင့် DISC ဖြစ်ပါတယ်…
D သည် Dominance (ကြီးစိုးတတ်ခြင်း) ကို ကိုယ်စားပြုပြီး၊
I သည် Influence (သြဇာညောင်းခြင်း) ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်…
S သည် Steadiness (တည်ငြိမ်ခြင်း) ဖြစ်ပြီး
C သည် Compliance (စနစ်ကို လေးစားလိုက်နာခြင်း) ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်…
DISC သည် လူတို့၏ သိစိတ်ဖြင့်ပြုမူသော အပြုအမူများ (Conscious Behavoir) ကို လေ့လာခြင်းဖြစ်ပြီး Extended DISC သည် မသိစိတ်ဖြင့် ပြုမူမိသော အပြုအမူများအကြောင်း (Unconscious Behavior) ကို အလေးပေးပြီးလေ့လာတဲ့ ပညာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Communication Mastery for Leaders သင်တန်းမှ4Houses of DISC ကို တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့် သင့်မှာရှိတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို သိရှိလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအပေါ် မူတည်ပြီး သင်သတိမမူမိဘဲ ပြုမူနေတတ်တဲ့ အပြုအမူတွေကို ပိုပြီး သတိမူမိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း သင့်ကို စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေတဲ့ အရာတွေနှင့် သင့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှုကို လျော့နည်းစေတဲ့အရာတွေကိုပါ သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သင့်အနေနှင့် မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်ရှာဖွေခွင့်ကိုပါ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လူတွေမှာ မတူညီတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ စတိုင်လ်တွေ ရှိတဲ့အကြောင်း၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတခုချင်းစီမှာ ရှိတတ်တဲ့ အပြုအမူတွေကို သိရှိနိုင်မှာဖြစ်သည့်အပြင် လူတွေနဲ့ ကင်းကွာလို့မရတဲ့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက် လူအမျိုးမျိုးနဲ့ အောင်မြင်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအစီအစဉ်ကို တက်သင့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
4 Houses of DISC ဆိုတာ ဘာလဲ
လူတွေရဲ့ အဲဒီကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး (၄) မျိုးကို လွယ်ကူစွာ သိရှိနားလည်စေဖို့အတွက် သင်တန်းအတွင်းမှာ အဖွဲ့ (၄) ဖွဲ့ခွဲပြီး လေ့လာကြရတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လို့4Houses of DISC လို့ ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။
လူတို့ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားတွေ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကို လေ့လာရာမှာ သီအိုရီတွေကိုချည်း ဖတ်ပြနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သင်တန်းထဲမှာ အဖွဲ့လိုက် Activity တွေလုပ်ရင်း၊ Exercise တွေလုပ်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ် ပိုပြီးသိရှိလာမှာဖြစ်သလို တခြားသူတွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထားတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့အပြုအမူတွေကို သင်တန်းပြီးဆုံးတဲ့အချိန်မှာ ယခင်ကထက် များစွာ နားလည်သဘောပေါက်လာအောင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းစွာ သင်ကြားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
4 Houses of DISC ကို လေ့လာသင်ယူခြင်းအားဖြင့် အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
- မိမိအကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိလာပါမယ်။
- မိမိမှာရှိတဲ့ အားသာချက်တွေကိုလည်း သိရှိလာပါမယ်။
- မိမိမှာ တိုးတက်အောင် ကြိုးစားသင့်တဲ့အချက်တွေကိုလည်း လေ့လာရပါမယ်။
- မိမိကိုယ် စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေတဲ့အရာတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာတွေကိုပါ သတိပြုမိလာပါမယ်။
- မိမိကို စိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှု လျော့နည်းစေတဲ့အချက်တွေကိုလည်း သိရှိလာပါလိမ့်မယ်။
- မိမိနဲ့ ဆက်ဆံပြောဆိုနေရသူတွေအပေါ်မှာလည်း ကိုယ်နဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိတဲ့သူတွေကို ဘယ်လိုဆက်ဆံပြုမူသင့်တယ်ဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်လာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
- လူတွေရဲ့ အပြုအမူတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ စတိုင်လ်တွေကို ခန့်မှန်းတတ်လာမှာဖြစ်ပြီး လူတိုင်းနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ဆက်ဆံလာနိုင်တာနှင့်အမျှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာရော၊ မိတ်ဆွေအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ မိသားစုဘ၀မှာပါ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘ၀တွေကို ပိုင်ဆိုင်လာနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
- သင်တန်းပြီးဆုံးပါက Breakthrough Coaching, Training & Consulting မှ ပေးအပ်မည့် Certificate ကိုလည်း ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
- Supervisor များနှင့်
- မိမိ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ဖော်ထုတ်ကာ အားသာချက်များကို သိရှိပြီး လူအများနှင့် ဆက်ဆံရေး ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လိုသူတိုင်း တက်ရောက်သင့်သော သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းတက်ရောက်မည့်သူတိုင်း သင်တန်းရက်မတိုင်မီ Assessment Test ကို အွန်လိုင်းမှ ဖြေဆိုရန် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို သင်တန်းအပ်သည့်အခါ ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
U Nai Lo Mung (Professional Business Coach)
U Lin Lin Tun (Professional Business Coach)
သင်ကြားမည့် facilitator (၂) ဦးသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ အခြေစိုက်သည့် SEAC ကုမ္ပဏီ၏ Certified Trainer of Extened DISC များ ဖြစ်ကြပါတယ်…
သင်တန်းသားများအနေဖြင့် သင်တန်းကာလမတိုင်ခင်တွင် Assessment Test ဖြေဆိုရန်လိုအပ်ပါတယ်။
Assessment Test ဆိုသည်မှာ
DISC (၄) မျိုးတွင် မိမိသည် ဘယ်လိုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသူဖြစ်ကြောင်းကို ရှာဖွေနိုင်ရန်အတွက် စနစ်တကျသတ်မှတ်ထားသော မေးခွန်းများကို ဖြေကြားရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းသားများ ဖြေကြားထားသော ထိုအဖြေလွှာများကို Server သို့ email ဖြင့် ပို့ပေးကာ System ကနေ Result ပြန်လည်ထုတ်ယူရပါတယ်။
သင်တန်းသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ အဖြေလွှာများကို သင်တန်းကာလမတိုင်ခင် ကြိုတင်ထုတ်ယူထားနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ထိုသင်တန်းတွင် သင်၏ အပြုအမူအကြောင်း လေ့လာဆန်းစစ်ချက် Extended DISC Assessment Report ကိုလည်း ရရှိမည်ဖြစ်သည့်အတွက် သင့်ကိုယ်သင် ဘာတွေ ပြုပြင်ရမလဲဆိုတာကိုပါ သိရှိလာပါမယ်။
အသေးစိတ်ကို သင်တန်းအပ်နှံသည့်အခါ ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်နှုန်း (Normal Price) - 250,000 Ks
(Assessment Test + Training Fees)
အထူးဈေးနှုန်း (Early Bird) - 150,000 Ks
(ပထမဆုံး အပ်နှံသူ ၂၀ ဦးအတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်)
၂၀၁၈ မတ်လ ၃၁ - ဧပြီလ ၁
မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီအထိ
Hotel Marvel (Mandalay)
အမှတ် ၅၃၊ ပထမထပ်၊ ဇလွန်လမ်း၊ ဂွဈေးအနီး၊ လင်းလွန်းတောင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09 765 222 103
09 765 222 107
09 765 222 108
09 765 222 109
သင်ကြားမည့် Facilitator ၂ ဦး၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
ဦးနိုင်လိုမွန် (Professional Business Coach)
ဦးနိုင်လိုမွန်သည် Certified John Maxwell Trainer, Speaker & Coach & Professional Business Coaches Alliance (PBCA Myanmar) ၏ Founding Member နှင့် Certified Professional Business Coach တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ The American Board of Neuro-Linguistic Programming (ABNLP) အသိအမှတ်ပြု Certified NLP Trainer၊ Certified Master Coach နှင့် Certified Master Time Line Therapist (TLTA) တဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ The University of Northampton (UK) မှ Master of Business Administration (MBA) Degree အား ရယူထားသည့်အပြင် လက်ရှိတွင် Mystery Shoppers Myanmar တွင် Managing Director နှင့် Breakthrough Coaching, Training & Consulting တွင် Executive Director အဖြစ် တာဝန်ယူထားသလို Business Coaching, Team Facilitation နှင့် Team Coaching များကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါတယ်။
ဦးလင်းလင်းထွန်း (Professional Business Coach)
ဦးလင်းလင်းထွန်းသည် Certified John Maxwell Trainer, Speaker & Coach & Professional Business Coaches Alliance (PBCA Myanmar) ၏ Founding Member နှင့် Certified Professional Business Coach တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် The American Board of Neuro-Linguistic Programming (ABNLP) အသိအမှတ်ပြု Certified NLP Trainer ၊ Certified Master Coach (ABNLP) နှင့် Certified Master Time Line Therapist (TLTA) တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ဦးလင်းလင်းထွန်းသည် Myanmar B2B Management Magazine တွင် နိုင်ငံတကာမှ စွန့်ဦးတီထွင်သူများနှင့် Startup များအကြောင်း စသည့် စီးပွားရေးနှင့် အောင်မြင်ရေးဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများကို လင်းလင်းထွန်း (Success Coach) အမည်ဖြင့် လစဉ်ရေးသားနေသည့် ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင် ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် "ဇီးရိုးမှ ဟီးရိုးဖြစ်ခဲ့ကြသည့် ဘီလျံနာများ၊ စွန့်ဦးတီထွင်သူများနှင့် NLP မိတ်ဆက်" ဟူသော ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာအုပ်ကိုလည်း လင်းလင်းထွန်း (Success Coach) အမည်ဖြင့် ရေးသားထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိတွင်လည်း Breakthrough Coaching, Training & Consulting တွင် Executive Director အဖြစ် တာဝန်ယူထားသလို Trainer နှင့် Success Coach အနေဖြင့် 12 Hours Personal Breakthrough Coaching နှင့် One on One Coaching ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနေပါတယ်။
Corner of 78th St & 30th St,Mandalay Railway Station,Chan Aye Tharzan Township,Mandalay., Mandale, 100102, Myanmar